फैलीदै बराह । | www.itaharifm.com.np
गृहपृष्ठ » सम्वृद्धि यात्रा » फैलीदै बराह ।
आजभन्दा करिब २४ बर्ष अगाडि धरानबाट सुरु भएको बराह ज्वेलरी अहीले देब बिदेशका शहरमा फैलिएको छ । युवाहरुले स्वरोजगार बन्ने प्रयास स्वरुप सुरु गरेको यो ब्यबसाय अहीले ब्राण्ड बनेको छ । २०५२ सालमा सामान्य सुन पसलबाट सुरु भएको बराह अहीले चाइना देखि बेलायत र दुबही सम्म पुगेको छ भने स्वदेशमा काठमाडौँ, पोखरा र नारायणगढमा पनि छ । धरानमा त डिपार्टमेण्ट स्टोर, वितीय कारोबार गर्न बराहा बचत र रेमिटेन्स, बस सेवा, बराह कृषि उपज तथा पशुपालन , बराह बाल संसार र बराह फेमली किचन तथा एम्बुलेन्स सेवा र खानेपानी ढुवानी सेवा समेत सन्चालनमा छन् । काठमाण्डौंमा अभिमत बचत सहकारी, कृपा दृष्य डिजिटल रेकर्डीगं स्टुडियो लगायतका सेवा समेत यही टिमबाट सन्चालीत छन् । 16d सिनेमा सहीत आधुनिक ब्यबसायमा बराह स्थापीत छ । सानो लगानीबाट सुरु भएको बराहको यो सफलता र अबका चुनौतीको बारेमा आज हामीले यही बराह टिमको धरान शाखाका प्रमुख मान बहादुर दियालीसंग कुराकानी गरेकाछौ ।
धरानको पहिलो डिपाटमेन स्टोर बराहा । तर अहिले धरानमा धेरै डिपाटमेन स्टोर आइसकेका छन् यसले गर्दा बराहामा के प्रभाव पारेको छ ? हामिलाई झन ठुलो उपलव्दी भएको छ । किनकि यसरि ठुल ठुला व्यवसायी धरानमा भित्रीदा धरानका बासिन्दाले पनि धेरै सुबिधा पाउनु भयो । त्यसैगरि धरानमा वाहिरी पर्यटनहरु पनि भित्रीन थाल्नु भयो जुन हाम्रो ग्राहाक हुनुहुन्छ उहाहरु लगायत अन्य पर्यटकहरु पनि हाम्रामा भित्रीने भएकाले बराहामा अझ फइदा भइराखेको छ ।
तपाइहरुले भखरै बराहा उपज तथा पशुपालन प्रा. लि. खोल्नु भयो । तपाइहरु सुनको व्यबसाय गर्दा गर्दै किन कृषि व्यवसाय थाल्नु भयो ?
बराह जहिले पनि एउटा परिकल्पना गर्छ । र त्यस्तै बराहा पशुपालन खोल्यो यसमा माछा पालन, कुखुरा पालन, गाई पालन, उन्नत जातको घास उत्पादन लगायतका कृषि परियोजना संचालन गरिराखे छ । यी योजनाहरु संचालन गर्दा यहाँका स्थानियबासि एवम् किसान परिवारसंग काँधमा काँध मिलाउदै काम गर्नलाइ, स्वरोजगारको अवसरहरु सृजना गर्न, र कृषिमा आधुनिकिकरण ल्याउन, कृषिबाट केहि हदैन भन्ने कृषक, यूवा, हरुलाइ यसरि कृषि गर्न सकिन्छ भनि देखाउन र सरकारलाइ कृषिपटि लगानि लगाउन पहल गर्न हामि कृषि व्यवसाय थालेका हौँ ।
धरानमा अरु पनि डिपार्टमेण्ट स्टोर छन । सुन पसलहरु छन् । अरुलाइ छाडेर बराहलाइ नै कीन छान्ने ? अरु भन्दा यो के मा फरक छ ?
बराहामा नुन देखि सुन सम्मका सामानहरु पाइन्छ । बराहामा सुुन तथा पर्थरजडित गरगहना iso सटिफाइड कम्पनिबाट प्रमाणित भएका गरगहना पाइन्छ । र देश विदेशका गरगहनाहरुको डिजाइन आफ्नै कारखानामा बनाइन्छ । बराहाले छरिएर रहेको पुजिलाई संकलन गरि बचत गराउछ । हामी बिभिन्न सामाजिक काममा पनि छौ । सस्तो मअुल्यमा गुणस्तरीय सामान बेच्छौ ।
अब आगामि दिनहरुमा बराहा लाई कसरि अगाडि बडाउने सोचमा हुनुहुन्छ ?
बराहाको शाखालाई देश बिदेशका बिभिन्न ठाउँमा खोल्ने, कृषि, पसुपालन लगायत अर्गानीक खाद्य सामाग्रीको उत्पादन गर्ने । धेरै भन्दा धेरै रोजगारी सृजना गर्ने । नेपालमा बनाईएका गरगहनाहरु बिदेशमा बेचेर पुजि नेपालमा भित्राउने, बिभिन्न किसिमको व्यपार व्यवसाय गर्न रीण दिने, परामर्स दिने प्रोत्साहान गर्ने लगायत आर्थिक उनतिको लागी बिभिन क्रीयाकलापहरु गर्ने सोचमा छौँ ।